February 2021 – Cn Chautari
February 24, 2021 admin 683
गायिका अन्जु पन्त वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी छिन् । उनले आज प्रेमी थिर कोइरालासँग बिहे गरेकी हुन् । अन्जु र थिर एक बर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । उनीहरुले बिहे गर्ने बताएपनि मिति भने तय नभएको बताउँदै
February 23, 2021 admin 1164
न्यूज २४ टेलिभिजनमा । ‘सिधा कुरा जनतासँग’ छाडेपछि आजबाट नयाँ कार्यक्रम सुरु गर्दै रवि लामिछानेकाठमाडौं । चर्चित टेलिभजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले आज बाट नयाँ कार्यक्रम शुरु गर्ने भएका छन् । उनले सामाजिक संजाल फेसबुक मार्फत
February 22, 2021 admin 4009
विभिन्न बिसयमा समाबेश गरि मनिषहरुलाई मनोरंजन दिनका लागि दिनानु दिन यस्ता भिडियोहरु निर्माण भैरहेका छन् ।सोहि अनुरुप युट्युब च्यानल । राष्ट्रिय’ता टिभीले पहिलो पटक भेटन जादा भन्ने टाईटल राखेर नेपाली छोटो चलचित्र टाइम पासको भाग
February 22, 2021 admin 540
भ’र्खरै उ’र्लाबारी प्र’हरी का’र्यलयमा पर्यो य’ती ठु’लो झ*ड़प, मि’सिलको फोटो चेन्ज ग’रेको भन्दै’ य’स्तो. । भ’र्खरै उ’र्लाबारी प्र’हरी का’र्यलयमा पर्यो य’ती ठु’लो झ*ड़प, मि’सिलको फोटो चेन्ज ग’रेको भन्दै’ य’स्तो. सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ
February 21, 2021 admin 9659
प्रधानमन्त्री । केपी शर्मा ओली विराटनगरको शनिबारको आ’मसभा चन्द्रमाले मात्रै देख्न सक्ने बताएका छन्। शनिबार ओली नेतृत्वको नेकपाले विराटनगरमा । आ’योजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सभालाई ड्रो’न र क्या’मेराहरुले खिच्न नसक्ने बताएका हुन्। कार्यक्रममा
नेपाली चेली ‘एलिशा’ र घनाका युवक ‘डेनिस’ को अनौठो मायाप्रेम (भि’डियो सहित)
February 21, 2021 admin 9698
नेपाली चेली ‘एलिशा’ र घनाका युवक ‘डेनिस’ को अनौठो मायाप्रेम (भि’डियो सहित भनिन्छ; “सुन्दरता संग गतिने प्रेम उमेरले मेटाइदिन्छ । अनि धनी संग गरिने प्रेम समयले सकाइदिन्छ । तर मन संग गरिने प्रेम संधैभरी रहिरहन्छ
मध्यरातमा बुहारीसंग ३ युवा र क्सी खाएर बसे, विहान बुहारी हराइन्: दुई दिन पछि सासु पनि मृ त फेला (भिडियो हेर्नुस्)
February 21, 2021 admin 382
काठमाडौ । मध्यरातमा बुहारी अ प ह र ण परिन्, बुहारी माथि घटना भएको दुई दिन पछि फेरी उनकै सासु मृ त फेला परेको घटनाले गुल्मीमा सार्वजनिक भएको छ । सासु बुहारी र १६ महिनाको
२० व’र्षीया बुहारीको ब यान : जब सासु बाहिर जानुहुन्थ्यो, स सुराले मौ’का छो पि हाल्नुहुन्थ्यो’ हेर्नुहोस् !!
February 21, 2021 admin 13412
आफ्नै बु हारीसँग अ’नैति’क स’म्बन्ध बनाएको अ भियोगमा ससुरा प क्राउ परे । प्र हरीले भोजपुरको टेम्केमैयुङ गा उँपालिका–९ बस्ने ४५ व र्षीय जयबहादुर राईलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीमा उजुरी दिन गएकी बुहारीले सासु
आज ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य
February 20, 2021 admin 14766
काठमाडौ नेपाली बजारमा बजारमा सुनको मस्ल्य हुवात्तै घटेको छ । मंगलबार तोलाको २ सयले बढेर ९० हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुनको मूल्य आज तोलामा ११ सय रुपैयाले घटेर ८९ हजार ८ सय रुपैंयामा
यी महिलाले बच्चालाइ जन्म दिएपछि, पेटबाट निस्केको अर्को चिजले डाक्टर अ *चम्म परे ! देश भरिनै भयो खैलाबैला पूरा हेर्नुहोस
February 20, 2021 admin 296
एउटा अचम्मको घ’टना सार्वजनिक भएको छ । यहाँ एक गर्भवती महिलाले बच्चालाई जन्म दिइन् तर जब महिलाले बच्चा जन्माइन् तब डाक्टरको होस् उड्यो । महिलाको पेटबाट बच्चासहित ब’न्दुकको गो’ली पनि निस्कियो । वास्तवमा हाजिपुरको सुल्तानपुरमा
प्रदेश बाट साहेबज्युको प्रेमिल पत्र (50848)
सडकमा मागेर खाने युवती बनिन् संसारकै एक उत्कृष्ट एक मोडल,हेर्नुहोस (50475)
आफ्नो श्रीमानलाइ छोडेर हिड्दा… भिडियो?? (44901)
LEX 18 agenda conversation: Job club (41526)
भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै यसरी बि’ग्रियो भिडियो हेर्नुहोस्… (39637)